“Aingao Ny Ziponao, Manavota Aina”, Fanentanana Mikasika Ny Homamiadan’ny Vozon’ny Tranonjaza Mampisaraka An’i Singapore · Global Voices teny Malagasy
“Aingao Ny Ziponao, Manavota Aina”, Fanentanana Mikasika Ny Homamiadan'ny Vozon'ny Tranonjaza Mampisaraka An'i Singapore
Voadika ny 02 Jona 2013 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, বাংলা, polski, Svenska, srpski, عربي, Português, 日本語, English
Ho fampahatsiahivana ireo Singaporeana momba ny fitiliana ny aretin'ny vozon'ny tranonjaza amin'ny alalan'ny fizahàna maimaim-poana Pap atao amin'ity volana ity, namoaka ilay fanentanana “Aingao ny ziponao. Manavota aina” ny Singapore Cancer Society, izay nahatonga adihevitra mafàna momba ny hoe kanto ve izany, mandaitra sa mandratra.
Nanasongadina ireo olo-malaza tao an-toerana mamerina mandika ny fihetsik'i Marilyn Monroe tanatin'ny horonantsariny “The Seven Year Itch” io hetsi-panentanana io. Hita eny amin'ireo fiandrasana fiarabe fitaterana sy fiarandalamby ny peta-drindrin'io hetsi-panentanana io.
Araka ny voalazan'ny Singapore Cancer Society, ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza no aretina mateti-pitranga ao amin'ny firenena:
Mitàna ny laharana faha-9 eo amin'ireo homamiadana hita amin'ny vehivavy Singaporeana ny Homamiadan'ny Vozon'ny tranonjaza. Isan-taona, vehivavy 200 no fantatra fa manana io aretina io ary 70 amin'izy ireo no matin'izany. Aretina faran'izay azo sorohina sy tsaboina io aretina io.
Ny 1 ka hatramin'ny 31 Mey 2013, afaka misitraa fizahàna MAIMAIM-POANA momba ny aretin'ny vozon'ny tranonjaza amin'ny alalan'ny Pap izay atao any amin'ireo toeram-pitsaboana rehetra mandray anjara ao amin'ny nosy ireo vehivavy Singaporeana rehetra sy ireo PR 25-69 taona, .
Toeram-pitsaboana 178 fara-fahakeliny no manao Pap fizahàna maimaim-poana amin'ity volana ity. Nifangaroharo ireo fihetseham-po manoloana izany fanentanana izany. Ny sasany nandoka izany ho manintona ary ny hafa kosa nihevitra fa dokambarotra mikasika ny lamaody na ny fanenan-tena izany. Ny sasany hafa kosa nitsikera izany ho diso manaitra filàna loatra.
Ilay fanentanana “Aingao ny ziponao. Manavota aina” ho fanandratana ny fahamailoana manoloana ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Singapore Cancer Society
“Everything Also Complain” dia mino fa na fampahatsiahivana tsotra momba ny fisianà fitiliana maimaim-poana ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza aza dia ampy:
…tsy mila lohateny mivandravandra sy mahabe resaka tahaka izao ianao hisarihana ny sain'ireo vehivavy Singaporeana. Mahavita azy tsara ny teny iray ahitana litera efatra ary ahitana ny litera F: FREE (M: MAIMAIM-POANA), ary voasakan'ireo ‘caps’ kely sy ny lohateny mahakamo ireo izany teny kely mahagaga ka mahatonga ireo Singaporeana hilahatra mandritra ny ora maro ho anà zavatra tsy ilainy izany
Miombon-kevitra amin'izany ihany koa i “a musliminah in NL”:
natao hisarihana ny mason'ireo lehilahy ny hevitra ambadiky ny vehivavy manaitra filàna, izay manome hevitra amin'ny fijerijerena sy fahavononan'ireo vehivavy hanao firaisana. Mihevitra ny tompon'ity fanentanana ity fa tsy tena miasa ny kilalaon-teny anatin'ireo fanentanana, raha nihevitra kosa ny hafa fa tsy hevitra tsara ny manao fanentanana manaitra filàna nefa mitondra hafatra manan-danja.
Inona ny teny hanaitra ny sain'ny Singaporeana amin'ity fanentanana ity? Ho an'ny fanentanana manaraka, ity no hevitra atolotro:
MAIMAIM-POANA ny Fitiliana Homamiadan'ny Vozon'ny Tranonjaza!
Tokony hanintona ny saina sy hampirisika ireo vehivavy hisoratra anarana ho an'ireo fitiliana maimaim-poana izany. 🙂
Manohana io hetsika io i Mr Brown fa kosa tsy faly amin'ny foto-kevitr'ilay fanentanana:
Tena manohana tanteraka ny fanairana ny saina mikasika ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza aho anefa dia “Aingao ny Ziponao, vonjeo ny ainao” ve?
Efa tonga amin'izany ihany koa maninona raha tsy atao hoe “Sokafy ny fenao, vonjeo ny ainao”?
Na “Esory ny kilaotinao, vonjeo ny ainao”?
Na koa “Asehoy ny entanao, vonjeo ny ainao”?
Na izany na tsy izany, na eo aza ireo savoritaka ireo, resaka matotra ny homamiadana ary hanome ny rohy mankany amin'ny fampahalalana momba ilay fitiliana maimaim-poana ny homamiadana amin'ny Mey aho
Manoratra ho an'ny Breakfast Network, manohana io fanentanana io i Wesley Gunter:
…raha AFAKA mandrisika vehivavy maro hafa handeha hanao fitiliana ity fanentanana ity noho ny FANAIRANY ny mason'izy ireo sy ny fanavotany ny ainy, moa tsy nahatratra ny tanjona niriany va izy?
Ny hany “mampalahelo” amin'ity raharaha manontolo ity dia voakiankiana sy noharatsiana ity sangan'asa kanto ity mialohan'ny nahafahany naneho hoe nety na tsiany nataony .
Linda Black, iray amin'ireo mpilatro nandray anjara tanatin'ity fanentanana ity, dia faly tanteraka amin'ny fahalavorarian'ilay fanentanana:
Tena mirehareha amin'io fanentanana io ny tenako, ary mihevitra aho fa tsara ny fomba nangalàna ny sary ary namboarina tsara hifanaraka amin'ireo olana ara-pahasalaman'ny vehivavy ao am-pony. Mijoro amin'izany aho, ary hiaro izany sy ny fanapahan-kevitro handray anjara ao anatiny.
Ankoatra izay, fahalavorariana goavana io fanentanan io – maro ny olona miresaka momba izany, na naheno izany, ary nisy voam-pahamarinana voavoly: oviana ianareo vehivavy no nanao fitiliana farany? Moa tsy mahafinaritra ve ny mahita fa anatin'ity firenena ity, miahy tsara anao ny fitondrana ary manome anao ny fitiliana MAIMAIM-POANA izay mendrika anao?